Archives Istaraatiijiyadeed - CasinoAdvisor.eu
Istaraatiijiyadda Sic Bo
Waxaan jeclaan laheyn inaan halkaan kugula hadalno ciyaarta sic bo. Tani waa ciyaar laadhuu ah oo ka soo bilaabantey Shiinaha isla markaana caan ku ahayd qarniyo. Waxay hadda sidoo kale qabsatay suuqa yurub waxaana laga heli karaa casinos badan oo internetka ah ee EU. Way fududahay in wax la barto lana ciyaaro sidoo kale… Continue reading Istaraatiijiyadda Sic Bo
Kala sooc sida Strategy
Istaraatiijiyada Khamaarka ugu Fiican iyo Talooyinka
Ciyaarta turubku waxay baran doontaa dad badan. Waa si sax ah mid ka mid ah ciyaaraha miiska ugu caansan oo laga heli karo noocyo badan. Intaa waxaa dheer, waxaa laga ciyaaraa adduunka oo dhan waxaad sidoo kale ka heli kartaa bixiyeyaasha Yurub kuwaas oo inta badan ku bixiya qolka tooska ah ee dhabta ah real Continue reading Istaraatiijiyada Khamaarka ugu Fiican iyo Talooyinka
Istaraatijiyadda Naqshadeynta Ugu Fiican
Markaad ciyaareyso booska, sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar aad ku kordhin karto fursadahaaga ku guuleysiga iyadoo lagu saleynayo talo gaar ah. Dabcan waxaad joogtaa booska inta badan. Istaraatijiyad boosaska lafteeda ah ma jirto, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan noqon karin qof firfircoon oo sameyn kara xulashooyinka saxda ah marka aad ciyaareyso. Afyare… Continue reading Istaraatijiyadda Naqshadeynta Ugu Fiican
Craps waa ciyaar si tartiib tartiib ah u guuleysaneysa suuqa Yurub. Tusaale ahaan, waxaa laga heli karaa marba marka ka dambeysa EU-yada khadka tooska ah ee EU-da. Si loo kordhiyo fursadahaaga guuleysiga waxaad adeegsaneysaa istiraatiijiyad craps. Nasiib wanaagse, tani maahan wax dhib badan oo sidoo kale waxaa isticmaali kara ciyaartoy laylis ah. Craps waa ciyaar aad leedahay… Continue reading Istaraatiijiyada Craps
Istaraatijiyad aasaasiga ah ee Blackjack
Ma xiiseyneysaa ciyaarta miiska sida blackjack? Markaad ciyaareyso, waxaad rabtaa inaad sidaas ku sameyso istiraatiijiyad cad! Halkan waxaan ka wada hadli doonnaa istiraatiijiyadda aasaasiga ah ee aad ku isticmaasho blackjack. Marka hore, si kastaba ha ahaatee, waxaan si kooban uga hadlaynaa ciyaarta blackjack lafteeda. Intaa ka dib, waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa istiraatiijiyadda aasaasiga ah ka hor inta aynaan gunaanadkeenna drawing Continue reading Istaraatijiyad aasaasiga ah ee Blackjack
Istaraatiijiyada Baccarat ee ugu fiican
Ciyaarta Baccarat waxaa sidoo kale loo yaqaan Punto Banco. Waxaa si gaar ah looga yaqaanaa James Bond waxayna caan ku tahay qaarada Aasiya. Waqtigan xaadirka ah, si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale gaartay yurubiyanka khadka tooska ah ee internetka iyo casinos-ku-saleysan dhulka. Waxaad ka ciyaari kartaa khadka tooska ah ee casinos badan oo sare, laakiin sidoo kale Holland Casino. Si kastaba ha noqotee, Baccarat ayaa caan ka ah… Continue reading Istaraatiijiyada Baccarat ee ugu fiican
Nidaamka Roulette Parlay
Ku ciyaarista khadka tooska ah ee internetka waa mid caan ah. Waa hab madadaalo leh oo lagu khamaarayo, gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso nidaamka 'Parlay roulette system'. Iyo haddii aad tan ku sameyso ama lacag la'aan, labaduba waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan. Ma waxaad dooneysaa inaad baashaalto, laakiin waxna ha u hanjabin? Markaa waxay noqon kartaa fikrad fiican in lagu ciyaaro khadka tooska ah… Continue reading Nidaamka Roulette Parlay
Hal Istaraatijiyad Roulette Wonder Roulette
Ma xiiseyneysaa roulette oo waxaad raadineysaa xeelado cusub oo aad isku daydo? Waxaan jeclaan lahayn inaan halkaan kuugu soo bandhigno istiraatiijiyadda Hal Hit. Tani waa istiraatiijiyad cusub oo gaar ah oo si gaar ah loogu jecel yahay ciyaartoyda khadka tooska ah ka ciyaara. Ku ciyaarista roulette bilaa istiraatiijiyad badanaa faa'iido yar. Waxaan marka hore ka hadli doonaa waxa istiraatiijiyadda Hal Hit ah… Continue reading Hal Istaraatijiyad Roulette Wonder Roulette
Istaraatijiyad Roulette Martingale
Istaraatiijiyadda roulette Martingale waa mid ka mid ah xeeladaha ugu caansan ee aad isticmaali karto inta lagu jiro ciyaarta roulette. Roulette waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan ee hadda la ciyaaro. Qaar badan oo naga mid ah, kulankaan wuxuu la mid yahay casino. Giraangiraha wareegaya iyo croupier dhahaya 'rien ne va plus' ka hor… Continue reading Istaraatijiyad Roulette Martingale
Nidaamka Labouchere Roulette
Ciyaaryahan roulette ahaan, waxaad u badan tahay inaad maqashay nidaamka Labouchere. Nidaam loo yaqaan inuu yahay mid qatar ah, laakiin sidoo kale kuu keeni kara faa iidooyin waaweyn! Nidaamka 'Labouchere' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Cancellation, Cross-Out' iyo Split Martingale waxaadna ku shaqeyneysaa macaash go'an oo nidaamkan ah. Halkan waxaan ku galaynaa aasaaska… Continue reading Nidaamka Labouchere Roulette
Bogga ugu weyn » Strategy